Timor Atsinanana: Nambabo Ny Fon’i Londra Ilay Mpihazakazaka (Marathon) · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 19 Aogositra 2012 0:53 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Português, polski, 日本語, English
Nambabo ny fon’ireo mpijery marathon tamin’ny lalao Olaimpika ilay tanora mpanao hazakazaka marathon, Augusto Soares, 25 taona, noho ny faharetany sy ny endrika sariaka teny aminy. Efa nifaninana tany Beijing izy efa-taona lasa izay, saingy tsy nahatody hatramin’ny farany, ka tamin’ity indray mitoraka ity, ny hamita hatramin’ny farany ny hazakazaka no tanjony.
Vitany hatramin’ny farany ny ankamaroan’ireo fifaninanana nandraisany anjara, nisy ny fanantenana tamin’ity fifaninanana hazakazaka nandraisany anjara tamin’ny fotoana farany nanakatona ny Lalao Olaimpika 2012 tao Londra ity. (Tonga teo amin’ny laharana faharoa alohan'ny farany izy tamin’ny ora naharitra 2:45:09.)
Vahoaka ravoravo milahatra amin’ny araben’i Londra Wall sy Barbican no niarahaba an’i Augusto Soares avy ao Timor Atsinanana. Sary avy amin’i Richard Soans copyright Demotix (12/08/2012)
Annie Martin nisioka hoe:
Nahafinaritra ny hazakazaka Marathon Olaimpika, manofahofa ny sainako ivelan’ny tsangambato aho. Ankafiziko ny ambiansy ao Timor Leste manakoako amin’ny sofina!
Chris Spillane kosa nisioka hoe:
Olaimpiana ankafiziko indrindra, Soares avy ao Timor Atsinanana, nitàna ny laharana farany tamin’ny Marathon sokajy lehilahy. Izay tena Fanahin’ny Olaimpika http://yfrog.com/obrxpmjj
Mpisera Youtube Marwat86 naka sary ny horakoraka sy tehaka ho an’i Soares tamin’izy nandalo ny fetra fahatongavana.
Nisy ny fanadihadiana nataon’ny Firenena mikambana (ONU) tamin’ i Soares sy ny mpiray tarika aminy Juventina Napoleao, izay roa volana fotsiny talohan’ny Lalao Olaimpika no nanombohan-dry zareo nanao fanazaran-tena.
Bilaogera Celso Olivieira nanadihady an’i Soares ihany koa. Nilaza ny tena namporisika azy indrindra izy
Tamin’ny alalan’ny fandraisana anjaran’i Timor no nahafahana nampahatsiahy ny olona manerana izao tontolo izao fa firenena afaka i Timor ary miaina am-pilaminana.
Nilaza i Soares fa te-ho modely ho an’ny tanora izy ary hampandroso ny fanatanjahatena ho an’ny fireneny.
Saingy tsy mahavita na inona na inona aho raha miankina amiko irery, satria miainga avy amin’ny mpitondra ny zava-drehetra. Afaka milaza aho fa hanangana klioba miaraka amin’ireo mpanao fanatanjahatena marobe [any aoriana any], saingy raha tsy manana hetsika izahay , inona no mety hitranga, na hanao fanazaran-tena ny atleta na mety handeha hody. Mety hampandroso ny fanatanjahatena ve izany?
Niresaka momba ny fomba nandraisan’ilay Timorey nilalao olaimpika Aguida Amaral azy manokana ho toy ny zazalahy mpianatra tao Balibar, tanàna kely any an-tendrombohitra eo ambonin’ny renivohitra i Soares.
Eny, nahare momba ny fifaninanana aho tamin’ny alalan’ilay vehivavy antsoina hoe Aguida Fatima Amaral. Tamin’izany fotoana izany, mbola tany an-tsekoly tao an-tendrombohitra aho ary mbola nipetraka niaraka tamin’ny ray aman-dreniko ihany koa. Indray andro, tonga tao ampianaranay i Aguida mba hanoratra ny anaran’ny mpianatra ho ao amin’ny kliobany antsoina hoe SLB. […] Tamin’ny fanazarantena nataonay tao, nahatsikaritra i Aguida fa afaka miditra fifaninanana tsara izahay ka nentiny tany Dili mba hanao fanazarantena.